ch 4 uphawu – 2fish
ekhaya / Bible / YeVangeli kaMarko / ch 4 uphawu
4:1 kwaye kwakhona, waqala ukufundisa ngaselwandle. Kwaye isihlwele esikhulu wahlanganiselwa kuye, kangangokuba, yanyukela wangena emkhombeni, ke wayehleli phezu kolwandle. Kwaye ke indimbane yonke ezisemhlabeni ecaleni kolwandle.
4:2 Wayebafundisa iindawo ezininzi ngemizekeliso, Wathi ke yena kubo, ekubafundiseni kwakhe:
4:3 "Phulaphula. Khangela, umhlwayeli waphuma waya kuhlwayela.
4:4 Yaye ngoxa wayehlwayela, kwakhe yawa enye indlela, yaye iintaka zezulu zayidla ngayo.
4:5 kodwa ngokwenene, Ezinye ke zawa phezu ezilulwalwa, apho bezingenamhlaba kakhulu. Kwaye waphakama ngokukhawuleza, ngenxa yokuba ibingenabunzulu bamhlaba.
4:6 Zathi ke lakuphuma ilanga zatsha, yatsha. Kwaye ngenxa yokuba ingenazingcambu zendeleyo, yabuna.
4:7 Yimbi yawa phakathi kwemithana enameva. Yaye ameva awakhula kunye suffocated ngayo, kwaye abazange ongavelisi siqhamo.
4:8 Yimbi yawa kumhlaba olungileyo. Ke sona savelisa iziqhamo akhula, kunye nokwanda, zanikela: ethile amathathu, asithandathu, amanye nekhulu. "
4:9 Wathi yena, "Lowo uneendlebe zokuva, makeve. "
4:10 Ke kaloku, xa abeyedwa, kwabalishumi elinababini, ababenaye, bambuza umzekeliso.
4:11 Wathi ke yena kubo: "Eya kuwe, kokuba linikwe ukuyazi imfihlelo yobukumkani bukaThixo. Kodwa abo bangaphandle, yonke ufundwa ngemizekeliso:
4:12 'lo nto, ebona, ukuze babone, kwaye akabonwa; zibone, ukuba bezwe, bangaqondi; hleze nangaliphi na ixesha ukuze kuguqulwa, izono zabo baya kuxolelwa kubo. ' "
4:13 Wathi ke yena kubo: "Ngaba na lo mzekeliso? Kwaye, Nothini na ke ukuyazi imizekeliso yonke?
4:14 Lowo uhlwayela, uhlwayela ilizwi.
4:15 Ke kaloku kukho abo endleleni, apho ilizwi lihlwayelwa khona. Ke kaloku, xa bathe beva oko, USathana uza ngokukhawuleza alithabathe ilizwi, leyo elihlwayelweyo ezintliziyweni zabo.
4:16 yaye ngokufanayo, kukho abo bahlwayelwayo phezu ezilulwalwa. le, xa bathe baliva ilizwi, nangoko ukuyamkela bevuya.
4:17 Kodwa babe bengenazingcambu zendeleyo, kwaye ngoko ke ixesha elithile. Nembandezelo xa elandelayo kunye yintshutshiso ngenxa yelizwi, boyisakale kwangoko.
4:18 Kwaye kukho nabanye abo bahlwayelwayo emithaneni enameva. Ngabo abo balivayo ilizwi,
4:19 kodwa imisebenzi yezwe, nenkohliso lobutyebi, kunye neminqweno malunga nezinye izinto bangene ayizange igama, kwaye ngempumelelo engenaziqhamo.
4:20 Kwaye kukho abo bahlwayelwayo emhlabeni olungileyo, basakuthi balive ilizwi, balamkele; yaye ezi nithwale isiqhamo: ethile amathathu, asithandathu, amanye nekhulu. "
4:21 Wathi ke yena kubo: "Umntu Ngaba angene isibane ukuze uyibeke phantsi kwesitya okanye ngaphantsi kwesingqengqelo? Ngaba bekungayi kubekwa phezu kwesiphatho?
4:22 Kuba akukho nto ifihlakeleyo ingayi kutyhilwa. Kananjalo akubangakho nto emfihlekweni, ngaphandle ukuze zifumaneke eluntwini.
4:23 Ukuba ubani uneendlebe zokuva, makeve. "
4:24 Wathi ke yena kubo: "Cinga into eniyivayo. Enilinganisela abanye ngawo wena esilinganiselweyo, niya kulinganiselwa kwangawo nani, kwaye ziya kongezelelwa kuni.
4:25 Kuba osukuba enako, kuye kuya kunikwa. Nosukuba engenako, kwanoko anako kuya kuthatyathwa kuye. "
4:26 Wathi yena: "Ubukumkani bukaThixo like this: kuba ukuba umntu ukuba aphose imbewu emhlabeni.
4:27 Kwaye ulele, evuka, ubusuku nemini. Kwaye iyantshula imbewu kunye ikhula, nangona engayazi ukuba.
4:28 Kuba umhlaba uvelisa iziqhamo lula: lokuqala isityalo, ize ibe sisikhwebu, olulandelayo yingqolowa ezalisekileyo esikhwebini.
4:29 Yaye xa isiqhamo eveliswe, uthumela nangoko ngaphandle irhengqa, ngokuba kusekusondele ukuvuna ufikile. "
4:30 Wathi yena: "Ukuze Sifanele kubufanisa nantoni na ubukumkani bukaThixo? Okanye ngubani esimele uthelekise ngamzekeliso mni na?
4:31 Kufana nokhozo lwemostade leyo, xa sele luhlwayelwa emhlabeni, lube luloluncinane kuzo zonke iimbewu abakulo umhlaba.
4:32 Ke, xa luthe lwahlwayelwa, lukhule lube lukhulu kunazo zonke izityalo, yaye luvelisa amasebe amakhulu, kangangokuba iintaka zezulu ziyakwazi ukuphila phantsi komthunzi walo. "
4:33 Kwaye ngemizekeliso emininzi enjalo wathetha ilizwi kubo, njengokuba njengoko baye benako ukuva kakhulu.
4:34 Kodwa akazange athethe kubo ngaphandle kwangomzekeliso. kodwa ngokwahlukileyo, , abacombululele iindawo zonke abafundi bakhe.
4:35 Yaye ngaloo mini, kwakuhlwa bafika, Wathi yena kubo, "Makhe wela."
4:36 Kwaye zokukhaba isihlwele, Bamzisa kuye, ukuze ukuba besesikhepheni enye, kwaye ke kukho eminye imikhonjana inaye.
4:37 Yaye isivunguvungu enkulu, namaza ayaphula phezu isikhitshana, ngokokude umkhombe sigcwaliswe ukuba.
4:38 Waye wayesemva esikhepheni, ilele umqamelo. Kwaye ke bamvusa baza bathi kuye, "Mfundisi, ngaba malingabi nanceba na, sitshabalala nje?"
4:39 Esukile, wawukhalimela umoya, wathi elwandle: "Ukuthula. Ukuba ndiwuzolise. "Kwaye wadamba umoya. Kunye nokuzola enkulu.
4:40 Wathi ke yena kubo: "Kutheni na ukuba noyike? Ingaba usafuna kuswela ukholo?"Kwaye zangenwa lawo ngoloyiko olukhulu. Bathi omnye komnye, "Ucinga ukuba le nto, ukuba ngumoya nalulwandle?"
EyoMsintsi 19, 2019